‘पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको छु’ | Nagarik News - Nepal Republic Media
‘पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको छु’
सुविन्द्र तामाङ, वडाध्यक्ष, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका वडा– ५
२० वैशाख २०७६ ७ मिनेट पाठ
म जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यहाँको वडा कार्यालय व्यवस्थित गरे। राज्यले खडा गरेको नियममा रही यहाँका जनतालाई विभिन्न खालका सेवा सुविधा दिए। यो वडाभित्र समग्र आठदेखि १० किलोमिटरसम्मको कच्ची बाटो खोलेको छु। खानेपानीको ९५ प्रतिशत समस्यालाई हल गरी अहिले खानेपानीको सेवा दिएको छु। यहाँ के कति घर र सार्वजनिक जग्गा छन्, थाहै छैन। त्यसैले हामीले सबै यस्ता डाटाहरू संकलन गरी अन्तिम चरणमा पु-याएको छु।
तपाईको वडामा सबै कच्ची रोड छन्, कहिले सम्ममा पिच हुन्छ?
लगनखेलबाट करिब २५ मिटर टाढाको दूरीमा यो वडा छ। यो ठाउँ ग्रामीण भेग पर्छ। ग्रामीण भेग रहेकाले नै यहाँ वडा लगायत गाउँपालिकाको क्षेत्रमा पिच सडक नै छैैन। विभिन्न ठाउँमा जाने सडकको ट्रयाक भने खोल्दै आएका छौँ। त्यसैले यहाँ धेरै पूर्वाधार विकासको समस्या छ। हामी आइसकेपछि यसैमा केन्द्रित रहेर काम गरिरहेका छौँ। मुख्यतया यहाँ वडाको भित्री सडकमात्रै हामीले हेर्नुपर्छ। बजेटले भ्याएसम्म हामी वडा भित्रको पनि सडक पिच गर्ने छौँ। बजेटको समस्याले गर्दा सोचे अनुसारको विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले बजेट अनुसार मेरो कार्यकाल सम्ममा सडक पिच हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। वडा बाहिरको मुख्य सडक पिच गर्नको लागि डिपिआर गर्दै आएका छौँ। त्यसपछि माथिल्लो निकायबाट के कति बजेट निकासा हुन्छ, त्यही अनुसार काम गरेर सडक पिच गर्ने योजनामा छौँ।
तपाईंको वडा क्षेत्रमा इन्टेरनेट र टेलिफोन सेवाको समस्या छ, कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ?
यहाँ ग्रामीण ठाउँ भएकाले इन्टरनेट र टेलिफोनको धेरै समस्या छ। त्यसैले इन्टरनेट राख्नको लागि निजी संघसंस्थासँग समन्वय गरिरहेको छु। यहाँका वडावासीलाई सेवा दिने मेरो चाहना छ।
स्वास्थ्य, खानेपानी र शिक्षाको समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ?
यहाँ स्वास्थ्य उपचारको लागि पनि समस्या छ। कसैको स्वास्थ्य चेक गराउनको लागि यहाँ हेल्थ पोस्ट रहे पनि मान्छेलाई ठूलो बिरामी परेमा उपचार गर्ने अस्पताल छैन। त्यस्तो अवस्थामा काठमाडौं वा ललितपुरमै जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले वडावासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि सार्वजनिक जग्गामा अस्पताल बनाउने योजना अघि सारेको छु। खानेपानीको भने खासै समस्या छैन। राम्रोसँग शिक्षा दिन यहाँ रहेका विद्यालयको अनुगमन गरिरहेका छौं।
ग्रामीण भेगका वडावासीलाई सेवा दिन गाह्रो छ?
वडावासीलाई सेवा दिन धेरै गाह्रो छ। मुख्य त गाउँपालिकाबाट नै राम्रो सेवा प्रवाह छैन। कुनै कामको लागि जाँदा पनि कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिदैनन्। त्यसैले एकै छिनको काम पनि दुई दिन लाग्छ। त्यसैले गाउँपालिकाबाट केही विकासको योजना अघि सार्नु परेमा समस्या हुन्छ। यहाँका वडालाई विकास गर्नको लागि त मुख्य बजेटको आवश्यकता पर्छ। यस वर्ष करिब ५६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। विकास निर्माणका थुप्रै काम छन्। तर, पर्याप्त मात्रामा बजेट नभएकाले वडावासीको समस्यालाई समाधान गरी सेवा दिन सकिएको छैन। वडाको विकास निर्माणका काममा गाह्रो भए पनि म आइसकेपछि वडालाई व्यवस्थित गरिरहेको छु। आगामी दिनमा पनि सेवा दिँदै जानेछु।
तपाईको वडामा खोलानाला छन्, यसबाट कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न के–के काम गरिरहनुभएको छ?
यहाँ रहेका खोलानाला व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेटको माग गरेको छु। यहाँ थोरै भए पनि किसानले तरकारी खेती गरिरहेका छन्। उनीहरूका लागि विभिन्न प्रकारका बीउबिजन वितरण गरिरहेका छौं। कृषि क्षेत्रबाट मनग्य आम्दानी गराउनको लागि हामीले कृषकलाई कृषिसम्बन्धी थुप्रै तालिम दिएका छौँ। कृषि खेती गर्नको लागि अनुदानको पनि व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। खेलकुद क्षेत्रको लागि पनि केही योजना ल्याएको छु।
तपाईका योजना आफ्नो कार्यकालभित्र निर्माण पूरा होलान् त?
म जनताकै लागि निर्वाचित भएर आएको हुँ। त्यसैले वडावासीलाई सेवासुविधा दिनको लागि सधैं अग्रसर भएर काम गरिरहेको छु। विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छु। विकास निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्थापन भएमा र वडावासीले साथ सहयोग गरेमा मेरो कार्यकालमा सडक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको सुविधाको व्यवस्थापन गर्छु भन्ने आशा लिएको छु।
तपाईको कार्यकालमा वडालाई कस्तो बनाउने सपना छ?
मेरो कार्यकालमा बजेटले भ्याएसम्म यो वडालाई हरियाली बनाई आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने खालका स्वास्थ्य, खानेपानी, शिक्षा लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नेछु।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ १२:२७ शुक्रबार
जनप्रतिनिधि कोन्ज्योसोम_गाउँपालिका वडा_कार्यालय सुविन्द्र_तामाङ